Fisarahana, fahafatesana, fahasoavana.. ireo nanamarika ny taona 2018
Teraka an’i Psalm West, zanany fahaefatra i Kanye West sy Kim Kardashian
Nambaran’i Kim Kardashian tamin’ny fomba ôfisialy tamin’ny tambajotran-tserasera ny anaran’ny zanany lahikely vao teraka.
Teraka lahikely i Kanye West sy Kim Kardashian
Nahazo zanaka lahikely i Kanye Waste sy Kim Kardashian. Ny zoma 10 Mey lasa teo no teraka ity zaza ity raha ny fanambaran’ireo ray aman-dreniny tao amin’ny tambajotran-tserasera.
J. Lo., Victoria Beckham… tia zanaka amin’ny fomba hafa
Mazàna no tsy manam-potoana hikarakarana ny zanany loatra ireo olo-malaza. Mba hanamarihan’izy ireny ny maha-reny azy, noho izany, dia misy fombafomba ataon’izy ireo izay mampitola-gaga mihitsy indraindray.
“Met gala 2019” : Tena niavaka ny fiakanjon’ireo olo-malaza
Lanonana lehibe iray ifanomezan’ireo olo-malaza fotoana isan-taona ny “Met gala”. Hetsika fitadiavam-bola izay tanterahina ao amin’ny Metropolitan Museum ao New York izy ity.
Arnaah : “Namangy ahy ny Tompo”
“Lasa izao ary tsa mipody koa” hoy i Marinna Lemary na Arnaah teo aloha. Taorian’ireo hira evanjelika navoakany izay tsy mbola nisy fanambarana mazava tamim-pomba ofisialy avy aminy dia namoaka hafatra tamin’ny alalan’ireo olona akaiky azy tao anaty tambazotra sosialy Facebook i Arnaah.
Teraka lahikely i Meghane Markle
Teraka soa aman-tsara ny zanak’izy ireo voalohany omaly maraina 6 mey 2019 i Meghane Markle, vadin’ny printsy Harry.
Andeha ho tsiahivina kely, ao anatin’ireto sary ireto, ny tena nanamarika ny tontolon’ny fiainan’ireo olo-malaza tamin’iny taona 2018 iny. Na ny fahasoavana na ny fahoriana dia betsaka ireo zava-nitranga nampihetsi-po.
1. Fahasoavana isan’ny tena nalaza ny nahaterahan’i Louis, zanak’i Kate Middleton sy ny printsy William faharoa.
2. Niteraka ny zanany voalohany teo amin’ny faha-46 taonany i Adriana Karembeu
3. Nampihetsim-po ny maro ny fodiamandrin’ilay mpanakanto “Charles Aznavour” teo amin’ny faha-94 taonany
4. Betsaka ihany koa ireo voadona tamin’ny nahafatesan’ilay mpampandihy Avicii sy ilay mpanakanto “Chester Bennington”, mpihira tao anatin’ny tarika Linkin Park. Samy namono tena moa izy roalahy ireo
5. Ny taona 2018 no tena nisarahan’i Selena Gomez sy Justin Bieber rehefa nifandrirarira an-taona maro, ka niarahan’ity farany tamin’i Hailey Baldwin sy nanambadian’izy ireo mihitsy.